Sida loo saar Music ka iPod in Lugood =
> Resource > Lugood > Sida loo saar Music ka iPod in Lugood
Waxaan heysanaa of music on my iPod, laakiin anigu ma aan nuqul karo ka iPod gal aan version cusub ee hadda jira ee Lugood. Music aan helay ka computer jir ah oo jir Lugood qotomiyey iyo hadda marka aan doonayo culaysm waana music ee ka iPod in Lugood computer cusub, ma la ii daynin. Ma jiraa hab aan u samayn karaa?
Haa, dabcan. Waa bey u fududayd inuu xidho music ka iPod maktabadda wax Lugood. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay tagaan qalab dhinac saddexaad caawimaad ah. Haddii aad qabto lahayn fikrad cad ah oo ku saabsan qalabka, waxaad isku dayi kartaa this - TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu awood inaad music ka iPod maktabadda Lugood aan dadaal. Waa si awood leh in loogu badalo doono iyo wareejiyo files music la qaabab leheyn. Isla, waxaa music info gelin doonaa, sida play soo oogay, qashanka iyo ratings, ka iPod in Lugood, daynin aad ku raaxaysato heeso aad jeceshahay in maktabadda Lugood leh ka tanaasulaan.
Download this qalab dhinac saddexaad oo intaa ku daray in ay isku dayaan music ka iPod in Lugood.
Sida loo dhigay music ka iPod in Lugood
Hoos waxaa ku qoran 2 tallaabooyinka ku saabsan ku daray aad music iPod in Lugood leh version daaqadaha. Ku rakib qalab aad kombuutarka. Waxaa Orod, oo waxaad yeelan doontaa suuqa kala hoos.
Isticmaal iPod ee USB cable in ay ku xidhmaan aad iPod in PC. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad iPod xiran yahay, qalab this waxaa lagu ogaan doonaa oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageerada music laga saaray iPod taabto, nano iPod, classic iPod iyo shaandheeyn lagu iPod on maktabadda Lugood. Hubi info faahfaahsan oo ku saabsan taageeray iPod daydo halkan .
Tallaabada 2. Ku dar music ka iPod in Lugood
Halkan waxa ku jira laba siyaabood oo laga heli karo in lagu daro music maktabadda iPod in Lugood.
Mid waxa la gujinaya "iDevice Copy in Lugood". Marka uu furmo suuqa yar booda, guji "Start". Markaas, aad u heshid liiska ku jira oo dhan files warbaahinta waxaad ku dari kartaa in Lugood waxaa lagu muujiyey. Just sax music iyo playlists. Markaas, guji "nuqul Lugood". Qalabkani waxa uu ogaan doonaa oo ku dar songs in maktabadda Lugood uusan heysan.
Habka kale u dhigay music ka iPod on Lugood waa sida tan. In geedka buugga bidix, guji "Media". On line ugu sareeya, guji "Music". Sida aad ka arki, waxaa tahay labo ikhtiyaar: "Dhoofinta in" iyo "Smart dhoofinta in Lugood". Haddii aad rabto in aad kala shaandhayso gabayadii in hore u yihiin maktabadda Lugood iyo dar kuwa Lugood ma laha, guji "Smart dhoofinta in Lugood".
Maxaa dhacaya haddii aad dooneyso in aad ku darto heeso eegista ka iPod maktabadda Lugood? Dooro songs (heesaha oo dhan ama qaar ka mid ah heesaha) in aad doonayso in aad ku darto. Riix saddexagalka hoos "Dhoofinta in". Laga soo bilaabo menu hoos-hoos, doortaan "Dhoofinta in Lugood Library".
Haddii aad rabto in aad ku darto playlists maktabadda Lugood, waxaad riixi kartaa "playlist" galeeysid bidix. Dooro playlists aad doonayay. Sidoo kale. Riix saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library".
Hadda, aad u ogaato sida loo dar music ka iPod maktabadda Lugood. Aad bay u fududahay, soo maaha? Download TunesGo in ay isku dayaan naftaada.